Chelmo - အရင်ဘဝကအကြောင်းကို မသိစိတ်က သိနေမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အရင်ဘဝကအကြောင်းကို မသိစိတ်က သိနေမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အရင်ဘဝက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေက လက်ရှိဘဝမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေတတ်တယ်ပါတယ်။
ကဲကိုယ်က အရင်ဘဝက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ရေးရာကို သိဖို့ရန် အောက်က ၄ ခုထဲက တခုခုကို ရွေးပေးပါ။
A. မိန်းမသူရဲကောင်း ... သူတပါးအတွက်ဆိုရင် အမြဲကူညီချင်စိတ်အမြဲရှိနေသူ
သူကတော့ အရင်ဘဝမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ မိန်းမသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင် ဘာကိုမှမကြောက်ပဲ ဖြစ်သမျှကို ရဲရဲကြီး ရင်ဆိုင်တတ်သူပါ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုမှ မတွေးပဲ ရှေ့သို့သာလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်က ယခုတိုင်ရှိနေဆဲပါ။
B. ဗေဒင်ဆရာ ... ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝင်ရောက်နားထောင် ဖြေရှင်းပေးသူ
သူကတော့ အရင်ဘဝတုန်းက ဘုရင်၊ နန်းတွင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ပြသာနာတွေ၊ စိတ်ပူစရာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူပါ။ တိုင်းပြည်ကတိုးတက်ခဲ့တာက သူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ တဖက်သားရဲ့အခက်အခဲတွေကို နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့ အားသာချက်ကတော့ ယခုအချိန်ထိပင် ရှိနေပါသေးတယ်။
C. မှော်ဆရာ ... ကိုယ်သိတာတွေကို အကုန်လုံး မျှဝေတတ်သူ
သူကတော့ အရင်ဘဝတုန်းက ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ တန်ခိုးအတတ်ပညာနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကယ်ဆယ်တတ်သူပါ။ မှော်ဆရာဆိုတဲ့အတိုင်း လူတွေက ကြောက်တတ်ပင်မယ့်လည်း သူကတော့ လူချစ်လူခင်ပေါများ ခဲ့သူပါ။ အကောင်းဘက်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့ပညာကို အသုံးချခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်သိတာတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်သူဆိုတာ ယခုဘဝမှာလည်း ဒီအားသာချက်လေးရှိသေးတယ်နော်။
D. ခရီးသွား ... စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ် ပြင်းပြသူ
သူကတော့ အရင်ဘဝတုန်းက လူတွေမသိသေးတဲ့နေရာတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလိုသွားပြီးလေ့လာ စူးစမ်းချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက တွေ့ဆုံခြင်းတွေ၊ ကွဲကွာခြင်းဆိုတဲ့ လောကကြီးရဲ့ သဘာဝကို နားလည်ပြီးသားပါ။ နေရာအသစ်ကိုသွားရောက်ခြင်းဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်လို့ပါ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကို အမြဲသဘောကျနေသူပါ။ လူအများနဲ့တွေ့ဆုံပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြီး အကြံဥာဏ်သစ်တွေကို ရအောင် ဖန်တီးရတာကို ကြိုက်တဲ့စိတ်လေးက ယခုဘဝမှာလည်း ရှိနေဆဲပါ။